काठमाडौँ, असार २६ गते । पछिल्लो समय नेपालमा पनि आत्म ह त्याको घटना ह्वात्तै बढेर गएको छ । केहिदिन अघि मात्र दाङमा एक जना महिलाले फेसबुकलाइभ आयर आफनो प्राण त्याग गरेकी अलिजा गौतम पछि नेपालमा त्यस्तै प्रकारका थप घटनाहरु घटेका छन। दाङ पछी काठमाडौं र केहिदिन अघि मात्रै अस्ति शनिबार
भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै जानेक्रममा २६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले शुक्रबार दिएको विवरण अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा २६ हजार ५०६ जना संक्रमित पुगेको छन् । यो संख्या दैनिकी संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै हो ।केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले एकैदिनमा ४७५ जनाको कोरोनाका कारण
कास्कीमा पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या ७ जना पुगेको छ। र ११ जना घाइते पनि भएका छन् । पोखरा-१८ सराङकोटको गोठादीका टंकबहादुर थापाको घर पहिरोमा परेको थियो । थापासहित उनकी श्रीमती सोममाया थापा, दुई नाती र छिमेकी इशीका थापाको मृत्यु भेएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता सुवास हमालले जानकारी दिए
निरन्तर भारी वर्षाले गर्दा खोला तथा नदीमा आएको बाढीको कारण करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युतगृहहरुबाट क्रमशः करिब २४० र २५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वर्षाको कारण देशभर विद्युत्
काठमाडौँ, असार २६ गते । ज्योतिष’ अर्जुन थापा क्षत्री पक्राउ परेका छन् । क्षत्रीसहित ३ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालको टोलीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो । आफूलाई ‘अख्तियारको सहसचिव’ भन्दै ठगी गर्दै हिँडेको आरोपमा क्षत्रीलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत
दिनरातको वर्षासँगै पहिरो जाँदा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको रिखामा आज बिहान ७ जना बेपत्ता भएका छन् । घण्टीवाङ भन्ने ठाउँबाट खसेको पहिरोले २ परिवारका ७ जना बेपत्ता भएका मराङका वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भीमप्रसाद जुग्जाली र धनबहादुर जुग्जालीको घर पहिरोले बगाएको छ । भीमप्रसादको घरमा चार
हे भगवान: पोखरामा पहिरोमा पुरिएर ४ जनाको मृत्यु, ९ घाइते !
अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा परी पोखराका विभिन्न स्थानमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना घाइते भएका छन् । राति अन्दाजी २ः४५ बजेको समयमा पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोट गोठादीस्थित टंकबहादुर थापाको घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । सो घटनामा परी घाइते भएका अन्य छ जनालाई
आजबाट जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी चल्न दिइने !
सरकारले सम्बन्धित जिल्लाभित्र चल्न पाउने गरी यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ। मन्त्रिपरिषदका बैठकका निर्णय बिहीबार सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताए। अहिलेका लागि अन्तरजिल्ला सवारी साधन चलाउन पाइने छैन। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा सवारी
चिनियाँ मिडियाको टिप्पणी : भारतको प्रतिवाद गर्ने पहिलो मुलुक नेपाल !
भारतीय मिडियाले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई लिएर नानाथरी चर्चा गरिरहेका बेला चिनियाँ मिडियाले पनि भारतको विरोध गर्ने सिलसिलामा नेपालको समेत चर्चा गर्न थालेका छन् । चीनका अरु मिडियाको तुलनामा ग्लोबल टाइम्सले अलि बढी आक्रमकता देखाउने गरेको छ । सो पत्रिकामा छापिएका सामग्रीहरुको अनुदित सारसंग्रह हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं, जसबाट
जर्मनीमा एकजना व्यक्तिले भुलबस अनलाइनमा यसरी क्लिक गरे कि २८ वटा टेस्ला कार खरिदका लागि अर्डर गयो ।अनलाइनबाट मोडेल थ्री को टेस्ला कार खरिद गर्नका लागि क्लिक गर्ने क्रममा भुलबस २८ वटा कारका लागि उनले अर्डर गर्न पुगे ।सोसल मिडिया प्लाटर्फम रेडिटबाट सार्वजनिक भएको उक्त घटना अहिले विश्वका धेरै मिडियाहरुमा